မာသင် | Marthin Website
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် သင်တန်းသားပေါင်း 7,000+ ကျော် နှင့်အတူ နေ့စဉ်လေ့လာ ရှင်သန်တိုးတက်ကြပါစို့..
ဘ၀ ဆိုတာ စက်ဘီးစီးသလိုပဲ။ အရှိန်ကျပြီး လဲကျမသွားဖို့အတွက်.. ဆက်ပြီး ဆက်ပြီး နင်းနေဖို့လိုတယ်။
အိုင်စတိုင်းမှ သူ့သားသို့ပေးစာ (1930 feb,5)
လုပ်သင့်တဲ့ စီးပွားရေး အိုင်ဒီယာ (၁၂) ခု
ဘရိန်း ဆိုတာ ဘရန်း ကြိုက်တယ်။
လုပ်ငန်းငယ်တစ်ခု နဲ့ စတင်ပါ
အမြင် ရှိမှ လမ်းကြောင်း ရှိမယ်။
ကျွဲရိုင်းအချိုရည် နှင့် စီးပွားရေးသင်ခန်းစာ
သေးပေါက်ခန်းက ရတဲ့ စီးပွားရေးသင်ခန်းစာ
ရွှေဘိုသနပ်ခါး နှင့် စီးပွားရေးသင်ခန်းစာ
High Class ဝီစကီ ကရတဲ့ စီးပွားရေးသင်ခန်းစာ
အမြန်လမ်း ကရတဲ့ စီးပွားရေးသင်ခန်းစာ
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးသီချင်း နှင့် စီးပွားရေးသင်ခန်းစာ
နွားနို့ဗူး ပေါ်က မားကက်တင်းအိုင်ဒီယာ
အရောင်းဆိုင်သမားများအတွက် T&T အိုင်ဒီယာ
ရောင်းအားတက်ဖို့နည်းလမ်း (၅) ခု လိုတိုရှင်း အကြံပြုပါရစေ။
Pixar ကုမ္မဏီရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဖော်မြုလာ ( ၅ )ခု
Growth Rate တွက်နည်း 6min
ရာခိုင်နုန်း မှ အပိုင်းကိန်းနှင့် ဒသမကိန်းပြောင်းခြင်း 4min
အတိုးနုန်းရဲ့လျို့ဝှက်ချက် ကို တွက်ချက်ခြင်း 13min
Hp12c ငွေကြေးဂဏန်းပေါင်းစက်သုံးသူများအတွက် မသိမဖြစ် အခြေခံ (၈) ချက် 6min
အရောင်းတိုးတက်မှုနုန်း တွက်ချက်ခြင်း ( Sale Growth) 8min
ကျွန်တော့်ဖတ်ပြီး ကြိုက်သော စီးပွားရေးစာအုပ်များကို အနှစ်ချုပ်ပြီး၊ စာအုပ်ပါအိုင်ဒီယာများကို ဗွီဒီယိုဖြင့် လိုရင်းတိုရှင်း ပြောပြထားသည် ။
စာအုပ်တစ်အုပ်စာ ဗွီဒီယိုများ = ကော်ဖီတစ်ခွက်စာတန်ဖိုးမျှသာ (၅၀၀၀ကျပ်)
Video Book ( 11 Laws )
တက်ရောက်ရန် ပုံကို နိပ်ပါ
ဘရန်းမားကက်တင်း (Brand Marketing)
ဘိုင်အိုလော်ဂျီ မားကက်တင်း သင်တန်း
CCC Cash Calculation Class
Money 101 ငွေကြေးသင်ခန်းစာများ
မာသင် ၏ ထွက်ရှိပြီး စာအုပ်
ကိုယ်ပိုင်ဘရန်း နှင့် စီးပွားရေးဘရန်းတည်ဆောက်ခြင်းဗျူဟာနှင့် အိုင်ဒီယာ (၃၀)
(5in 1) စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အပြင် ..
၁. အခန်းတစ်ခန်းစီအလိုက်ရှင်းပြထားသော ဗွီဒီယိုများ
၂. ပုံပြ အိုင်ဒီယာ infographic များ
၃. ဖုန်းထဲထဲ့ထားပြီး နားထောင်နိုင်သော အသံဖိုင်များ
၄.လိုတိုရှင်း စာတစ်မျက်နှာ အနှစ်ချုပ် pdf ဖိုင်များ
အကြောင်းအရာ (၅) မျိုး ပါဝင်ပါသည်။
တန်ဖိုး = ၂၅ ၀၀၀ ကျပ်
(သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အလိုက် စာပေတိုက် စာအုပ်ဆိုင်များတွင်လဲ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူပြီးပါက ဗွီဒီယိုများကြည့်ရန် စာအုပ်ပါကုတ်နံပါတ် ပြန်လည်ပို့ပေးပါခင်ဗျာ။)
စာအုပ်ဝယ်ယူထားပြီးသူများ သင်ခန်းစာဗွီဒီယိုများကြည့်ရန် Click here ကို နိပ်ပါ
သင်တန်းသားများ၏ Review များ
ဆရာမာသင် သင်တန်း က ကျွန်မပထမဦးဆုံးတက်ဖူးတဲ့ online သင်တန်းပါ။ ဆရာပေးတဲ့ idea ကို လက်တွေ့အသုံးချပြီး ဆရာ့ကျေးဇူးနဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်သင်တဲ့ ဂျပန်စာ online class များစွာကိုယခုလက်ရှိအောင်မြင်စွာဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆရာ့လို ဆရာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာ အင်မတန်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတခုပါဆရာ။ ဆရာကတော့ အများကြီးပေးပေမယ့်ယူတတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားထက်ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးရှိရင်ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဆရာ့လိုလူသားများကိုအကျိုးပြုတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစာပါ့မယ်။ နောက်လည်းကူညီစောင့်ရှောက်သင်ကြားပေးပါအုံးနော်
Managing Director, DARUMA Japanese Language School
အကျိုးသိပ်ရှိတာ ပေါ့ ဆရာမာသင်လို လူမျိုးများများသာ ပေါ်ပေါက်ရင် မြန်မာ မှာရှိတဲ့ လူငယ် တွေ အားလုံး ပိုမိုတိုးတက်လာမှာ အမှန်ပါ သင်ပြရှင်းပြတာတွေ လည်း အရမ်းတော်ပါတယ် နောက်ထပ် လာမဲ့ သင်တန်းတွေကို စောင့်မျှော် ရင်းနဲ့ အတူ ဆရာမာသင်ကိုလည်း အပြင်မှာ ဆုံချင်သေးပါတယ်
ဆရာ ရဲ့ စေတနာ အပြည့်နဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သတ်စွာ သင်ပြလမ်းညွှန်မှုတွေ က ကျမအတွက် ခွန်အား ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ သိစရာ တွေ အသေးစိတ် သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် များစွာ အကျိုးရှိတဲ့ သင်တန်းပါ။ သင်တန်းကြေးထက်ကို ကိုယ်ပြန်ရလိုက်တဲ့ ပညာက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် အကျိုးရှိလို့ လူတိုင်းတက်သင့်တဲ့ သင်တန်းပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆရာ။ ဆရာနဲ့ မိသားစု တဖွဲ့သားလုံး ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ၊ စိတ်ချမ်းသာပါစေ။
ကားပစ္စည်း ဆိုင်( မန္တလေး)
ဒီသင်တန်းက အရမ်းကို အကျိုး ကျေးဇူးတွေ၊ အသိပညာတွေ ရရှိပါတယ် ဆရာ။ ဒီသင်တန်းကို တက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် စီးပွားရေး တစ်ခုလုပ်ဖို့ အတွက်၊ အသိပညာ နှင့် စီးပွားရေး ဗဟုသုတ အများကြီး ရရှိခဲ့ပါသည်။ Needs ကို ရှာတွေ့အောင် လုပ်ရပါ့မယ်။ Unique Value လုပ်ရမှာကိုလည်း ခေါင်းထဲရောက်သွားပြီး သင်တန်းကြေးနဲ့ မတန်အောင် ကို အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ရရှိလိုက်ပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးအချက်က Live အစီအစဉ် ကို အလွန်နှစ်သက် တယ်။ ဗဟုသုတ အများကြီး ရလို့ ဆရာမာသင်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Aminar Bi Bi
လစဉ် ပညာဒါန အလှူ
ဇွန်လအတွက် အလှူဒါန ကို ဤနေရာတွင် မကြာမှီ ကြေငြာသွားပါမည်
လမ်းကြောင်း .. ဆိုတာ ပိတ်ဆို့ဟန့်တားမှုတွေ၊ အခက်အခဲအတားအဆီးတွေကို ရှင်းလင်းဖောက်ထွက် ကျော်လွှားရာကနေ ဖြစ်တည်ပေါ်ထွန်းလာတာပါ။
ဒါကြောင့် အခက်အခဲ ဆိုတာ လမ်းကြောင်းသစ်ဖောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါပဲ။